၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ မှ ၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ ထိ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်အာဏာရှင် အစိုးရတို့က ၎င်းတို့ တဖက်သပ် စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားသည့် တရားမျှတမှုနှင့် ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းများ မပါဝင်သော ၂ဝဝ၈ နိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို အဓမ္မနည်းလမ်းများဖြင့် တရားဝင် အတည်ပြုရန် ကြိုးပမ်းခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ တဖန် အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးအတွက် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများကလည်း တရားမျှတမှုနှင့် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများ မပါဝင်ပဲ ဖြစ်နေပြန်သည်။
သို့ဖြစ်၍ ”၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး” ဟူသော တိကျသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသည့်အချိန်ထိ အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် လှုပ်ရှားရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများက အသင်းအဖွဲ့များ စုစည်းလုပ်ဆောင်သည့်ပုံစံဖြင့် “၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)”၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 2010 Election Boycott Committee (Japan) အတိုကောက်အားဖြင့် EBC ကို ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တော်ရှိ Shinjunku, Takadanobaba, Recycle Center4(F) တွင် ကျင်းပသော ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၉ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) အစည်းအဝေး၌ တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်ကာ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က အဖွဲ့အစည်း (၁၃)ဖွဲ့ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော်လည်း ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် အဖွဲ့ပေါင်း (၃ဝ) ထိ များပြားလာကာ နောက်ဆုံးအချိန်တွင် (၂၈)ဖွဲ့ဖြင့် စုပေါင်းရပ်တည်လျက် လှုပ်ရှားလျက် ရှိနေသည်။
ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်း စုစုပေါင်း စာရင်း
12 Aalinneain Magazine
19 Aahara Journal
မှတ်ချက်၊ Karen National Community (KNC-Japan) နှင့် Shan Nationalities for Democracy – Japan (SND-JP) တို့မှ နှုတ်ထွက်ကြောင်း ၂ဝ၁ဝ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက် အစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုသည်။
၅-၁၁-၂ဝ၁ဝ နေ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုချက်အရ လုပ်ငန်းကော်မတီကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်သည်။
Working Committee Information Election Watch
1 ကိုမိုင်ကျော်ဦး ကိုရဲငြိမ်း ကိုသောင်းမြင့်ဦး
2 ကိုသန်းဆွေ ကိုဖုန်းလှိုင် ကိုရဲငြိမ်း
3 ကိုသောင်းမြင့်ဦး ကိုလှအေးမောင် ဒေါ်မရစ်ဆိုင်းဘူ
4 ကိုကျော်ကျော်စိုး ကိုလှိုင်အေး ဦးနန်လျန်းထန်
5 ကိုဇော်မင်းခိုင် ဒေါ်မရစ်ဆိုင်းဘူ ကိုဇော်မင်းခိုင်
6 ကိုဖုန်းလှိုင် NLD မှ တဦး ကိုကျော်ကျော်စိုး
7 ကိုဘုန်းမြင့်ထွန်း CNC မှ တဦး ကိုသန်းဆွေ
8 ဒေါ်မရစ်ဆိုင်းဘူ BDA မှတဦး ကိုဖုန်းလှိုင်
9 ဦးဂျွန်မျိုးအောင် ကိုလွင်အောင်စိုး ကိုလွင်အောင်စိုး
l ဤကော်မတီ၏ ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်း လှုပ်ရှားမှုများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ် မလေးလေးမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည်။
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)တွင် အဓိက လုပ်ငန်းစဉ် ၄ မျိုး ရှိသည်။
1. လူထုပညာပေး (Public education)
2. လူထုအား နှိုးဆော်ရေး (Public awareness campaign)
3. ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှု စောင့်ကြည့်ရေး (Election watch)
4. ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ပံ့ခြင်း (Logistics)
ဤလုပ်ငန်းစဉ် ၄ မျိုးကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ နေ့မှ ၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ နေ့ထိ ၂၆-၉-၂ဝ၁ဝ နေ့မှလွဲ၍ အပါတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ကော်မတီ အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့သည်။
အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် နေရာများမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တော်၏ Shinjunku, Takadanobaba ရှိ Recycle Center4(F) နှင့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ (AUN) ၏ ရုံးခန်းတို့ ဖြစ်သည်။
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)၏ အကောင်အထည်ဖော် လှုပ်ရှားမှုများမှာ နေ့စွဲအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
1. ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်) Blog
ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မြန်မာပြည်သူတိုင်းအပြင် မဲပေးနိုင်ခွင့် မရှိသူ (သို့) မရှိသေးသူ၊ တနည်းအားဖြင့် အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲကြောင့် အနာဂတ်ကံကြမ္မာ ဆုံးဖြတ်ခံရမည့် ပြည်သူတရပ်လုံး အား ရွေးကောက်ပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများ၊ ဆန္ဒမဲ၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားနိုင်ခွင့် အခြေအနေ စသည်တို့၏ အခြေခံ အချက်များ၊ တန်ဖိုးများနှင့် အကျိုး သက်ရောက်ပုံများဆိုင်ရာ အသိပညာပေး စာ၊ ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကို ၃ဝ-ဂ-၂ဝ၁ဝ ရက်မှစတင်၍ ရေးသားစုစည်းဖော်ပြသည်။
Blog link – https://2010ebc.wordpress.com/ )
2. နအဖ စစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တရားဝင်အလည်အပတ်ခရီးအတွက် တိုကျိုရှိ တရုတ်သံရုံးရှေ့တွင် ၂ဝ၁ဝ စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နှင့် ၈ ရက် နှစ်ရက်ဆက်တိုက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီမှ ၄ နာရီထိ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြပြီး တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးမှတဆင့် တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ စာပေးအပ်ခဲ့သည်။
3. ပဲခူးမြို့မှ လက်နက်မဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူ လူငယ် ၂ ဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးရလောက်အောင် မြန်မာစစ်တပ်မှ မူးယစ်ရမ်းကားသည့် တပ်မတော်သားတချို့က စစ်မြေပြင်သုံး လူသတ်လက်နက်များဖြင့် လူနေရပ်ကွက် အတွင်း ဥပဒေမဲ့ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းအတွက် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲကို ၁ဝ-၉-၂ဝ၁ဝ (သောကြာနေ့) တွင် တိုကျိုရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့၌ ညနေ ၃ နာရီမှ ၄ နာရီ ကျင်းပပြီး အဆိုပါကိစ္စအတွက် တာဝန်ရှိသော စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံ တရားဥပဒေအရ တိကျစွာ အရေးယူရန် တောင်းဆို ထားသည့် အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
အထက်ပါ နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့် နေရာမှာပင် မတရားဖမ်းဆီး အကျဉ်းချခံထားရသည့် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အပတ်စဉ် တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲကိုလည်း တဆက်တည်း ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။
4. Global Action Campaign ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲအဖြစ် ၁၈-၉-၂ဝ၁ဝ (စနေနေ့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီမှစ၍ အခမ်းအနား စတင်ပြီး မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် တိုကျိုရှိ Ebisu ပန်းခြံမှ Setagaya ပန်းခြံထိ ချီတက် ဆန္ဒပြသည်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တရားဝင် အသက်သွင်းမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ဒီမိုကရေစီ လိုလားသည့် ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့က ကမ္ဘာအနှံ့ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် တရားမျှတမှု မရှိ၊ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစံနှုန်းများဖြင့် ကိုက်ညီခြင်းလည်း မရှိသော အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကို ဂျပန်နိုင်ငံသားများ ပိုမိုသိလာကြစေရန် နှိုးဆော်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
5. ဦးဟန်ညောင်ဝေနှင့် Victor Biak Lian တို့၏ ၂ဝ၁ဝ စက်တင်ဘာ (၁) ရက် ဂျပန်ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)မှ စက်တင်ဘာ ၂၅-၉-၂ဝ၁ဝ နေ့ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
6. “ဘာကြောင့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံရသလဲ (စာတမ်း)”ကို မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန် သုံးဘာသာဖြင့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)မှ ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။
7. ဂျပန်အစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော Mr. Seiji Maehara ထံ ဝမ်းမြောက် ကြောင်း သဝဏ်လွှာကို ၈-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ နေ့တွင် ပေးပို့ပြီး လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းတွင် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို အသိအမှတ် မပြုရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
8. ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်) အဖွဲ့ဝင်များက ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၃)ရက်တွင် တိုကျိုမြို့ Kasumikaseki ရှိ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ သွားရောက်ပြီး ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Yamahana Ikuo နှင့် တွေဆုံကာ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စအပါအဝင် မြန်မာ့ရေးရာကိစ္စများကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
9. ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လူထုနှိုးကြားမှုနှင့် ပညာပေးလုပ်ငန်းများကို အားဖြည့် ဆောင်ရွက်သည့်အနေဖြင့် ၁၇-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် Recycle Center4F, Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo ၌ နံနက် ၉ နာရီ ၃ဝ မိနစ်မှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ “မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ” (ပထမအကြိမ်)ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပုံ အသေးစိတ်ကို ဗီဒီယိုဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ကာ YouTube, Internet TV အစရှိသည့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းသို့၎င်း၊ အခြားနိုင်ငံအရပ်ရပ်သို့၎င်း ဖြန့်ချိပေးခဲ့သည်။
10. ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူရေးအတွက် “ကလေးမြို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကြေညာစာတမ်း” အပေါ် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)မှ ထောက်ခံကြောင်း ကြေညာချက်ကို ၂၅-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
11. ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်သည့် ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကို ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တော်တွင် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၇)ရက်နေ့တွင် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)မှ ဦးစီး၍ ကျင်းပလှုပ်ရှားသည်။ ဂျပန်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအပြင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို ထောက်ခံ အားပေးနေသည့် ဂျပန် အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် (RENGO) ၊ မြန်မာ့ရေးရာ ပြည်သူ့အဖွဲ့ (PFB) ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ (ဂျပန်)နှင့် Human Rights Watch ၊ Human Rights Now စသည့် NGO အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။
12. ၃၁-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် Recycle Center4F, Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo ၌ နံနက် ၉ နာရီ ၃ဝ မိနစ်မှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ “မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ” (ဒုတိယအကြိမ်)ကို ကျင်းပ ခဲ့သည်။ အဓိကဦးတည်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုဝင်ဘာ (၇)ရက်နေ့၌ ကျင်းပတော့မည့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာပြည်သူများထံ အမှာစကား ပန်ကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
13. ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်သည့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ပံ့ခြင်း (Logistics) အတွက် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရံပုံငွေ ကောက်ခံရာ ဂျပန်ယန်းငွေ ၅ဝဝ,ဝဝဝ (ငါးသိန်း) ရရှိပြီး မြန်မာကျပ်ငွေ ၅,၅ဝဝ,ဝဝဝ (ငါးသန်းငါးသိန်း) ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ (မှတ်ချက်- လက်ကျန်ငွေ အနည်းငယ်ကို တရားဝင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲ ဖြစ်သည်။)
14. ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ရသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းများ ရှင်းလင်းရေးသားထားသည့်စာကို တိုကျိုရှိ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန် သံရုံးများမှ သံရုံးတာဝန်ခံများထံ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ပေးပို့ခဲ့သည်။
15. ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများမှ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထား တင်ပြသည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ဂျပန်အလုပ်သမား သမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်များ ဌာနချုပ် (JTUC-RENGO)နှင့် မြန်မာ့ရေးရာရုံး BOJ တို့မှ ဦးစီး၍ တိုကျိုမြို့ရှိ ဂျပန် အလုပ်သမား သမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်များ ဌာနချုပ် (RENGO)ရုံးတွင် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၄)ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီဝင်များ တက်ရောက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။
16. ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၅)ရက်တွင် တိုကျိုမြို့ ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ ယုတက ဘန်နို နှင့် JTUC-RENGO ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး အင်အားစုများမှ မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးကြရာ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီဝင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
17. ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီနေ့နှင့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဖြစ်သော နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နှင့် ၇ ရက်များတွင် တိုကျိုရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့၌ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးအကျယ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသည်။
18. အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘဲလ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံနေရာမှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ရတော့မည့် ၁၃-၁၁-၂ဝ၁ဝ (စနေနေ့)တွင် မွန်းလွဲ ၂ နာရီမှ ၄ နာရီထိ တိုကျိုရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့၌ ဆန္ဒပြသည်။
19. နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံနေရာမှ ၁၃-၁၁-၂ဝ၁ဝ (စနေနေ့)တွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာသော မြန်မာလူထုခေါင်းဆောင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘဲလ်ဆုရှင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုကြောင်း သဝဏ်လွှာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
20. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)၏ သဘောထား ရပ်တည်ချက်ကို ၁၄-၁၁-၂ဝ၁ဝ နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
21. ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘဲလ်ဆုရှင်များ၏ နှစ်စဉ် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်စား ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)မှ ဦးကျော်ကျော်စိုးက ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်ထိ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
22. ၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ EBC အစည်းအဝေးတွင် အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)၏ သက်တမ်းကို ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ အတည်ပြုနိုင်သည်အထိ တိုးမြှင့်လိုက်သည်။
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)၏ ဘဏ္ဍာရေး မှတ်တမ်း
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်ဆန့်ကျင်ရေးကော်မတီ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း
စဉ် အဖွဲ့အမည် ထည့်ဝင်ငွေ (ပ) ထည့်ဝင်ငွေ (ဒု)
1 B.D.A Group 1,000 ယန်း 2,000 ယန်း
2 N.L.D- LA (JB) 1,000 2,000
3 L.D.B 1,000 2,000
4 အလင်းအိမ် 1,000 2,000
5 K.N.O 1,000 2,000
6 K.N.U (Jp) 1,000 2,000
7 A.B.F.S.U 1,000 2,000
8 K.N.L 1,000 2,000
9 P.B 1,000 2,000
10 F.W.U.B.C 1,000 2,000
11 P.N.S/ N.D.F 1,000 2,000
12 C.N.C 1,000 NIL
13 B.R.S.A 1,000 2,000
14 A.L.D 1,000 2,000
15 B.C.J.P 1,000 NIL
16 H.R.D.P 1,000 2,000
17 K.N.C 1,000 NIL
18 S.C.I 1,000 2,000
19 D.F.B 1,000 2,000
20 D.P.N.S 1,000 NIL
21 S.N.D 1,000 NIL
22 P.M.N.S 1,000 2,000
23 H.R.W.U.B 1,000 NIL
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ 57,000 (၅ သောင်း ၇ ထောင်) ယန်း
ရက်စွဲ အကြောင်းအရာ ကုန်ကျငွေ
၂၄.၈.၂ဝ၁ဝ ဆန္ဒပြပွဲ ပန်းခြံငှားခ ၈၄ဝဝ
၁၆.၉. ၂ဝ၁ဝ ဆန္ဒပြပွဲ ပိတ်စ၀ယ် ၂၅ဝဝ
၁၆.၉. ၂ဝ၁ဝ ယန်း(၁ဝဝ) ဆိုင်ဈေးဝယ် ၅၁၄၅
၁၆.၉. ၂ဝ၁ဝ ကော်ပီကူးခ ၁၈၉ဝ
ရွေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းကပ် သုံးငွေ (BDA) ၂၅၅ဝ၇
၂၇ ရက်နေ့ ဆန္ဒပြပွဲ ပန်းခြံငှါးခ (ကိုဘုန်းလှိုင်) ၇၂ဝဝ
၉ လပိုင်း မှ ၁၂ လပိုင်းအထိ အစည်းအဝေးအခန်း ငှား (BDA) ၉၈ဝဝ
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ ၆ဝ၄၄၂ ယန်း
လက်ကျန်ငွေ (၅၇ဝဝဝ- ၆ဝ၄၄၂) ( လိုငွေ) (-) ၃၄၄၂ ယန်း
မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါလိုငွေ ၃၄၄၂ ယန်းအား ဘဏ္ဍာရေးမှူးက စိုက်ထုတ်ပေးထားပါသည်။
အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် မှတ်တမ်း
Recycle Center, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
1. ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)၏ သက်တမ်းကို ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ အတည်ပြုနိုင်သည်အထိ တိုးမြှင့်လိုက်ပါသည်။
2. ကော်မတီအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကို မူလရည်ရွယ်ချက်များအရ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေသည့် တချိန်တည်းမှာပင် ကော်မတီ၏ ၁၄-၁၁-၂ဝ၁ဝ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်အတိုင်း ပြည်သူအားလုံး ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ရေးအတွက်
(က) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူလျက် ပူးပေါင်းပံ့ပိုး လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်
(ခ) မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း မတရားဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲ ဖြစ်သော ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးရန် လှုပ်ရှားခြင်းတို့ကိုလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမည် ဖြစ်သည်။
3. အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းရင်းများမှ ထွက်ပေါ်လာနိုင်မည့် အကျိုးတရားကောင်းများကို မျှော်ကိုးလျက် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများအကြား တဦးနှင့်တဦး၊ တဖွဲ့နှင့်တဖွဲ့ အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု၊ လေးစားမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ တာဝန်ခံနိုင်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု အစရှိသည့် ဒီမိုကရေစီ အခြေခံစံနှုန်းများအတိုင်း ပိုမို ညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားရန် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာပါသည်။
4. သို့ပါ၍ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ(ဂျပန်)၏ အဓိက လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သော အစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် လှုပ်ရှားမှုများတွင် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းမှ လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးချင်းအား၎င်း၊ အဖွဲ့အစည်းများအား၎င်း ယနေ့မှစ၍ အနာဂတ် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ၌ ညီနောင်သားရင်းများသဖွယ် ပြန်လည် ပါဝင်ပူးပေါင်းကြပါရန် နွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာ ဖိတ်ခေါ်လိုက် ပါသည်။
5. လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ (၂၈-၁၁-၂ဝ၁ဝ) တွင် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ (ဂျပန်)၏ အစည်းအဝေး ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်။ (အစည်းအဝေး အကြောင်းကြားစာကို သီးခြားပေးပို့ပါမည်)။ ထို့ပြင် အခါအားလျော်စွာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများကို ကျင်းပရန်လည်း ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
6. ၂၃-၁၁-၂ဝ၁ဝ နေ့တွင် လှုပ်ရှားမည့် “လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကြိုဆို ထောက်ခံပွဲ” တွင် အောက်ပါအစီအစဉ်များကို ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုပါသည်။
အခမ်းအနားမှူးများအဖြစ် ဦးဇော်မင်းထွန်းနှင့် ဒေါ်ကျင်ဟောက်လွန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အပြည့်အဝ ထောက်ခံကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေး လှုပ်ရှားနေကြသော အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ထုတ်ပြန်ချက်များ ဖတ်ကြား၍ လက်မှတ် ရေးထိုးကြပါမည်။ (ဖတ်ကြားသော ထုတ်ပြန်ချက်များကို စာအုပ်အဖြစ် စုစည်းမည် ဖြစ်သော ကြောင့် မိတ္တူတစောင်စီ ပေးပါရန်။)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ အရောက်ပို့မည့် “လူထုအသံ” အော်တို (Auto) စာအုပ်တွင် မည်သူမဆို၊ မည်သည့် နိုင်ငံသားမဆို မိမိတို့ တဦးချင်းအနေဖြင့် ပြောဆိုမှာကြား အကြံပေးလို သည်များကို ရေးသားကြပါမည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ မြန်မာပြည်သူများအားလုံးအပြင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း ကပါ ကြည့်ရှုနိုင်မည့် ဗီဒီယိုနှင့် ဓါတ်ပုံများကို မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးပါမည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကြိုဆိုထောက်ခံပွဲတွင် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ မြန်မာ အာဏာပိုင်များ၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်တကွ မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးသို့ ပန်ကြားလွှာ တစောင် စုစည်း ထုတ်ပြန်ပါမည်။ (ဖတ်ကြားမည့်သူ – ဦးလွင်အောင်စိုး)
ကြိုဆိုထောက်ခံပွဲသို့ မိမိတို့အစီအစဉ်ဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓါတ်ပုံများကို ယူဆောင် လာကြပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
ကြိုဆိုထောက်ခံပွဲတွင် We stand with Daw Aung San Suu Kyi စာတမ်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုပ်ပုံပါရှိသော T-shirt များကို ဝတ်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ထား ပါမည်။
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီ
ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် – 090-4964-9718, 090-9813-7192, 080-4005-7098, 080, 090-2525-1966, 080-5404-6600, 090-6031-4394, 080-5070-0080, 090-6040-8282, 090-5318-5054, 080-5888-3925.
Download PDF – Meeting Report _21-11-2010_
ဓါတ်ပုံနှင့် ဆက်စပ်သတင်း – http://www.pnsjapan.org/2010/11/blog-post_21.html